Wufuud horleh oo Maanta ku wajahan Garoowe & qaban qaabada shirka oo ka socota - Awdinle Online
Wufuud horleh oo Maanta ku wajahan Garoowe & qaban qaabada shirka oo ka socota
Magaalada Garoowe ee xarunta Gobolka Nugaal waxaa ka socda u diyaar garowga qabsoomida shirka Madasha Aragti Wadaagga Sanadlaha ee Machadka Hiratage, kaas oo 29 Bishaan oo Beri ah ka furmaya halkaas.
Shirka ayaa waxaa ka qeyb-galaya Guddoomiyeyaasha labada aqal ee Baarlamaanka, Qaarkamid ah madaxda dowlad Goboleedyada, Xubno kamid ah Midowga Musharixiinta iyo Ururada Bulshada rayidka.
Shirka oo sanadkiiba mar lagu qaban jiray dalka Jabuuti ayaa markii ugu horreeysay lagu qabanayaa Soomaaliya, waxaana sanadkaan looga hadlayaa xasilinta dalka ee dhanka Amniga, Dhameystirka Dastuurka, qabashada doorasho qof iyo cod ah iyo yagleelida nidaam Federaal oo Shaqeynaya.
Inta badan madaxda ka qeyb-galeysa Shirka ayaa ku sugan Magalada garoowe, waxaana maanta la filayaa inay halkaasi tagaan wufuud uu kamid yahay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali kheyre.
Ammaanka Magaalada Garoowe ayaa aad loo adkeeyay, waxaana wadooyinka waaweyn ee Magaaladaasi lagu arkayaa Ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa Amniga, kuwaas oo baaritaano ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan.
Previous articleGuddoomiye Cumar Filish oo u digay Ciidamada dhexdooda dagaalama